राम्रो "सामाजिककरण" को लागि4सुझावहरू Martech Zone
राम्रो "सामाजिककरण" को लागि4सुझावहरू
सोमबार, जनवरी 9, 2012 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 हन्ना जॉनसन
यदि तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ Martech Zone, सम्भावना यो हो कि कसैले तपाईंलाई पहिल्यै यो तथ्यमा समेटेको छ कि यो तपाईंको व्यवसायलाई यस बर्ष सामाजिक बान्नको लागि पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। A भर्खरै सर्वेक्षण हामी लागि आयोजित GrowBiz मिडिया २०१२ मा सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने सानोदेखि मध्यम व्यापारिक निर्णयकर्ताहरूले 40०% को योजनालाई खुलासा गरे। मैले हालसालै पाहुनालाई सुनें। व्यापार पागलपन रेडियो टक शो सुझाव दिनुहोस् कि सबै बिक्री व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आफ्नै कम्पनीको सामाजिक खाताहरू (ट्विटर, फेसबुक, आदि) दिइन्छ, ताकि उनीहरूको ग्राहकहरूको द्रुत, सजिलो, पारदर्शी तरीका सबै ठाउँमा पुग्न सक्दछ।
त्यहाँ केहि कम छन्, यदि कुनै छ भने, सोशल मिडिया प्रयोग बारे कडा र छिटो नियमहरू। मेरो सोशल मीडिया मार्केटरको रूपमा काम जुमेरंग, र अब SurveyMonkey, यसको मतलब यो हो कि मैले एक वा दुई चीजहरू के बारे मा सिकेको छु जुन काम गर्छ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के होईन। सामाजिक मिडिया सफलताको रहस्य नयाँ चीजहरूको प्रयास गर्न खुला छ, तपाईंको परिणामहरू नाप्न, र मेट्रिक्सको प्रयोग गरेर तपाईं, तपाईंको ब्रान्ड र दर्शकहरूको लागि के काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन। तर मसँग तपाईं सुरू गर्न4सरल चरणहरू छन्:
१. अनुमान नगर्नुहोस्। सोध्नु
एक ठूलो सामाजिक निम्नको निर्माणको रहस्य तपाईंको दर्शकहरूलाई सान्दर्भिक, रमाईलो सामग्री वितरण गर्नु हो। तर यदि तपाईं आफ्नो दर्शक को हो थाहा छैन भने तपाईं कसरी उत्तम सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? सोध्नु! सिर्जना गर्नुहोस् साधारण सर्वेक्षण र यसलाई तपाइँका अनुयायीहरू, फ्यानहरू र ग्राहकहरूलाई पठाउनुहोस्। जुमेरांग र सर्वेमोन्कीले तपाईले गर्न सक्ने टन्न निःशुल्क टेम्प्लेट प्रस्ताव गर्छन् अनुकूलन चित्रहरू, तपाईंको लोगो, र कम्पनी र addingहरू थपेर।
तपाईंको ग्राहकहरू को हो भनेर सोध्नुहोस्, उनीहरू कसरी तपाईंको उत्पादन वा सेवा प्रयोग गर्दैछन्, र उनीहरू कत्तिको सन्तुष्ट छन्। तपाईका ग्राहकहरूको बारेमा जति जान्नुहुन्छ र उनीहरूले के चाहान्छन्, तपाईले उनीहरूलाई उपयोगी र चाखलाग्दो जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
२. प्रमोट गर्नुहोस्, पदोन्नति गर्नुहोस्, प्रचार गर्नुहोस्
उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो, तर यो मात्र पहिलो चरण हो। एकचोटि तपाईंले यो सामग्री सिर्जना गर्नुभयो, तपाईंले यसलाई यथासक्दो टाढा र व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब Tweeting यसको बारेमा, यसलाई तपाईंको फेसबुक पृष्ठमा पोस्ट गर्दै, र प्रासंगिक लिंक्डिन समूह पृष्ठहरू। -80०-२० नियम सम्झनुहोस्, जसले भन्छ कि तपाईंले अन्य व्यक्तिको सामग्रीमा be०% समयको लागि प्रतिक्रिया देखाउनु पर्दछ, र तपाईंको आफ्नै सामग्री प्रचारको समयको २०% मात्र हुनुपर्छ। यो औंठाको प्राकृतिक नियम हो - कुनै पनि दिनभरि प्रोमोशनल मम्भो जम्बो सुन्न चाहँदैन।
तर अभ्यासमा तपाईं रेखा अलि अलि धमिलो पार्न सक्नुहुन्छ, र यो दुबै तरिकाहरूमा जान्छ। ब्लगमा टिप्पणी दिनुहोस् वा तपाईंको फ्यानको एक फेसबुक पोस्ट, र यदि यो प्रासंगिक हो भने, तपाईंको साइटमा लिंक समावेश गर्नुहोस्। पुन: ट्वीट जानकारी जुन तपाईंको उद्योगमा अन्य व्यक्तिले भनेका छन्, यदि यो सीधा प्रतिस्पर्धा होईन र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि उपयोगी छ भने। लिंक्डिन उत्तरहरू जाँच गर्नुहोस्, र जब कसैलाई समस्या आयो जुन तपाईंको सेवा वा उत्पादनले समाधान गर्न मद्दत गर्दछ, यसलाई प्रस्ताव गर्नुहोस्। केवल यकिन गर्नुहोस् कि तपाइँले टिप्पणी गरेर, पुनः-ट्वीट गरेर, र तपाइँको निष्पक्ष साझेदारी लाईक गरेर (%०%) लाई अनुकूलन फिर्ता गर्नुभयो।
Out. आउटबाउन्ड मार्केटिंग २०११ को सू २०११ हो
यी दिनहरू सबै इनबाउन्ड मार्केटिंगको बारेमा हो, जुन स्वाभाविक रूपमा आउनुपर्दछ एक पटक तपाईले चरण १ र २ मास्टर गर्नुभयो। तपाइँको ग्राहकहरुलाई चाखलाग्दो, सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गरेर, र यसलाई सही च्यानलहरूको माध्यमबाट प्रबर्धन गरेर, तपाइँ आफैले आफूलाई आफ्नो क्षेत्र मा एक विश्वसनीय विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गर्नु भन्दा पहिले यो लामो समय लिने छैन। मानिसहरु तपाईको अटो कम्पनी ब्लगमा आउनेछन्, जब उनीहरु कार किन्न चाहान्छन्, तर तिनीहरु जब २०१२ मोडेलहरु बारे मान्छे के भन्छन् जान्न चाहन्छन्। तिनीहरूले तपाइँको साइटमा अधिक समय खर्च गर्न सुरू गर्दछन्, र यसको जाँच गर्न अभ्यस्त हुनेछ किनकि तिनीहरूलाई तपाइँले नियमित रूपमा पोष्ट गर्नुहुन्छ भनेर थाहा छ (धकेल्नुहोस्, झिम्का झिम्काउनुहोस्)। तपाईंको बिक्री व्यक्ति तपाईंको साइटमा आउँदै गरेको समयको मात्रासँग सम्बन्धित हुनेछ, र त्यो तपाईं कसरी चरण १ र २ गरिरहनुभएको छ भनेर सम्बन्धित छ।
The. नकारात्मक नडराउनुहोस्: सक्रिय बन्नुहोस्!
मैले कुरा गर्ने धेरै एसएमबी निर्णय निर्माताहरू डराउँछन् कि सामाजिक जाँदा उनीहरूलाई सबै प्रकारका नकारात्मक प्रचारका लागि खोल्दछ। मैले यो पहिलो हातले अनुभव गरेंaसायद साताको एक हप्ता भयो जहाँ हाम्रो फेसबुक पृष्ठमा कुनै पेभरवेड ग्राहक भेटघाट गर्दैन, चाहे यो हाम्रो उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ वा छैन। यो डरलाग्दो हुन सक्छ, मलाई थाहा छ, तर तपाइँले यो याद राख्नु पर्छ कि ग्राहकहरूले तपाइँ आफैंलाई त्यहाँ बाहिर राखेर लिइरहेका जोखिमको कदर गर्दछन्, र तिनीहरूले यसको लागि तपाइँलाई आदर गर्दछन्। दिन को अन्त मा, तिनीहरू कम्पनी को अधिक संदिग्ध हुन जाँदैछन् कि सामाजिक डुबान को लागी एक भन्दा छ कि कहिले काँही आफ्नो ट्विटर पृष्ठ मा केही गर्मी पकड भन्दा एक। र हरेक असन्तुष्ट ग्राहकको लागि, हामीसँग satisfied सन्तुष्ट व्यक्तिहरू हाम्रो उत्पादसँग उनीहरूको सन्तुष्टि पोष्ट गर्दै छन्। उनीहरूको टिप्पणीहरू हाम्रो ब्रान्डको लागि अधिक लाभदायक छन् नकारात्मकहरू चोट पुर्‍याउने हो।
केवल एक समय, सकारात्मक तरीकाले प्रतिक्रियाको साथ व्यवहार गर्न सम्झनुहोस्। ग्राहक सँधै सही नहुन सक्छ, तर उनीहरूले महसुस गर्ने निराश उचित छ, त्यसैले यो स्वीकार्नुहोस्, र उनीहरूले सहयोग पुर्‍याउने सहयोगी कदमहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन तिनीहरूले परिस्थितिलाई सुधार गर्न सक्छन्। र सबै प्रतिक्रिया नकारात्मक हुनेछैन! जब कसैले तपाईंलाई बधाई दिन्छ, यसको लागि धन्यवाद, र तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् यदि तिनीहरू एक गर्न इच्छुक छन् भने ग्राहक सफलता कहानी तिमीसँग। तिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो आवाज (र ब्रान्ड) पाउँदछन्, तपाईं तिनीहरूको कार्बनिक समर्थन प्राप्त गर्नुहुन्छ, र सबैले जित्छन्।
म आशा गर्दछु कि यी tips सल्लाहहरूले तपाईंलाई सामाजिक हुन तपाईंको खोजमा सुरू गर्न मद्दत गर्दछ! कृपया तपाईंको प्रतिक्रिया, अन्य सुझावहरू वा कुनै प्रश्नहरू टिप्पणी गर्नुहोस्! खुशी सामाजिक छ!
टैग: उत्तम अभ्यासहरूसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया उत्तम अभ्यासहरूसामाजिक मिडिया सल्लाहसामाजिक सल्लाह
ईमेल ठेगानाहरूलाई सामाजिक खुफियामा रूपान्तरण गर्दै
जनवरी १, २०१ 11 १२::2012 अपराह्न
नमस्कार हन्ना! तपाईले यहाँ बनाउनु भएको बुँदासँग हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं। सामाजिक मिडिया व्यवसायको लागि ब्राण्ड जागरण निर्माण गर्न र उनीहरूले पाउन सक्ने अन्य धेरै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो। तथापि यसको प्रभावी रूपमा प्रयोग गर्नु कसैको लागि गाह्रो काम देखिन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि नयाँ वर्षले सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने नयाँ तरिकाहरू ल्याउँदछ। व्यवसायहरूलाई बोर्डमा हप गर्न राम्रो सल्लाह दिइनुपर्दछ ताकि उनीहरू लाभमा पर्न सक्दछन्। जे भए पनि महान पोष्ट!
जनवरी १, २०१ 12 १२::2012 अपराह्न
ईन्बाउन्ड भनेको यो सालको लागि हामीले योजना गरेका छौं। हामी केवल हाम्रो सामाजिक मिडिया रणनीति लेखिरहेका छौं र मैले यो पोष्ट एकदम उपयोगी पाएँ, त्यसैले मैले सोचें कि मँ तपाईंलाई मानिसहरू जस्तै मेरो पोष्टहरूमा टिप्पणी दिन चाहन्छु!
म पक्कै हाम्रो दर्शकहरु लाई सर्वेक्षण को बारे मा तपाईको सल्लाह लिन जाँदैछु। उच्च विचार।